Child – Page2– Healthy Life Journal
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ဂယက်နှင့် ကလေး ကျောင်းပို့သင့်/မသင့်
ပါမောက္ခဦးစောဝင်း (ကလေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း မေး ။ မိဘတွေအနေနဲ့ ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ဂယက်ကြောင့် ကလေးတွေကို ကျောင်းမပို့ဘဲ ထားသင့်ပါသလား ဆရာ။ ဖြေ ။ အခုအချိန်မှာတော့ ကျောင်းမပို့ဘဲ ထားမယ်ဆိုတာက အင်မတန် စောပါသေးတယ်။ မြန်မာပြည်မှာလည်း တကယ်ကူးစက်တဲ့သူက...
ဆေးရုံသုံး နှာခေါင်းစည်းတပ်ဆင်တဲ့အခါ (Surgical Face Mask)
– ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၁။ ဆရာရှင့် သိချင်တာလေးရှိလို့ မေးခွင့်ပြုပါဦးရှင် Face mask တပ်တာ အမှန်တပ်နည်းလေးသိချင်ပါတယ်ရှင် အချို့တွေက အတွင်းကအဖြူကို အပြင်မှာထားရမယ်ပြောကြပါတယ်ရှင့်။ အချို့တွေကတော့ အရောင်ပါတာကို အပြင်မှာတပ်ရတယ် ပြောပါတယ်ရှင်။ ပြန်လည် ဖြေကြားပေးပါဦးရှင်။ ၂။ ဒွိဟဖြစ်နေလို့ပါ ဆရာရှင့်။...
Q. ကေလးေတြမွာ တိုက္သင့္တယ္ဆိုတဲ့ ကယ္လ္စီယမ္ကေကာ အ႐ိုးအတြက္ ဘယ္လိုအက်ဴိးေက်းဇူးကို ေပးႏိုင္ပါသလဲ ဆရာ။ DDL (FB) ပါေမာကၡဦးေန၀င္း (အ႐ိုးအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။ A. ကေလးေတြမွာ ကယ္လ္စီယမ္ တိုက္တာေၾကာင့္ အ႐ိုးက်ဳိးႏႈန္းေလ်ာ့က်တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ကယ္လ္စီယမ္နဲ႔ အ႐ိုးက်ဳိးတာက...
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် စတီးရွိုက်သုံးစွဲပါက ဖြစ်တတ်သည့် နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေများ
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ဆယ်ကျော်သက်အများစုဟာ လူလုပ်ဟော်မုန်းလို့ တင်စားကြတဲ့ စတီးရွိုက်တွေကို ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ စတီးရွိုက်ဆေးတွေဟာ ကြွက်သားဖြစ်စဉ်ယိုယွင်းမှုကို ဟန့်တားပေးတာကြောင့် လူငယ်တွေ၊ အထူးသဖြင့် အားကစားသမားတွေ သုံးချင်ကြပါတယ်။ စတီးရွိုက်ဆေးရဲ့ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဆိုးကျိုးကို မသိဘဲ သုံးလေ့ ရှိကြတာပါ။ ကလိဗ်လန်းအားကစားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ လေ့လာမှုအရ...
မွေးကင်းစကလေးငယ်ကြောင့် ဖြစ်တတ်သည့် မိခင်တို့၏ စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများနှင့် ကာကွယ်ရန် အချက်အလက်များ
ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း-တာဝန်ခံ)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး- ကလေးမွေးပြီးကာစမှာ မိခင်တချို့က စိတ်ဓာတ်ကျတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို စိတ်ဓာတ်ကျတာက ဘာကြောင့် ဖြစ်ရပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ- ကလေးမွေးပြီးချိန်မှာ တချို့မိခင်တွေက စိတ်ဓာတ်ကျတတ်ပါတယ်။ ဒါကို Postpartum De-pression လို့ ခေါ်ပါတယ်။...
ကိုယ်နဲ့ အသင့်တော်ဆုံး လေ့ကျင့်ခန်းကို ရွေးလုပ်ရအောင် . . .
– ကိုထက် သင်က ဘယ်လောက်ခွန်အားကြီးတဲ့သူ ဖြစ်နေပါစေ၊ လေ့ကျင့်ခန်းကို ပုံမှန်ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ ဒါမှသာ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး သက်လုံကောင်းကာ အရွယ်တင်နုပျိုမှာ ဖြစ်လို့ပါ။ – သင်က သီးခြားနေတတ်သူဖြစ်လျှင် ရေကူးတာ၊ စက်ဘီးစီးတာ၊ လမ်းလျှောက်တာ၊ ပြေးတာစတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။...
အသက်နှစ်နှစ်အရွယ် ကလေးများ အာဟာရချို့တဲ့ခြင်း
ဒေါက်တာ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့်(အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ဆရာမ အတွေ့အကြုံအရ ပြောရမယ်ဆိုရင် တချို့ကလေးတွေက အများအားဖြင့် အသက်နှစ်နှစ် ကျော်လောက်မှာ အစာမစားတာတွေ ဖြစ်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။ အစာမစားတော့ တဖြည်းဖြည်း ပိန်လာပြီး ကြာလာတဲ့အခါ ရောဂါတွေဝင်လာပါတယ်။ တကယ်တော့ ကလေးတွေဟာ တစ်နေ့ကိုအစာစားကြိမ် ရှစ်ကြိမ်လောက် ရှိရပါတယ်။...
အပျင်းကြီးတဲ့ မေမေဖေဖေတို့ Diaper သုံးတာလား
မြန်မာပြည်မှာ ကလေးမွေးလာပြီဆို အဝတ်အနှီးပဲ သုံးမှာလား၊ diaper သုံးမှာလားဆိုတာ debate တခုပါပဲ။ တချို့ကလည်း diaper လောင်တဲ့ ကလေးဓာတ်ပုံတွေကြည့်ပြီး မိခင်စိတ်မရှိတဲ့ အမေတွေပဲသုံးတာစသဖြင့် ငြင်းကြပါတယ်။ ဒီအငြင်းပွားတာတွေကို ဝင်မပါဘဲ diaper သုံးပြီးရင် ဘယ်လို care လုပ်ပေးမလဲဆိုတာ...
မေး. ကလေး သင်္ချာတော်အောင် ဘယ်အရွယ်ကတည်းက ဘယ်လို ပံ့ပိုးပေးသင့်ပါသလဲ။ မိုးမိုးသင်း (FB) ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေး ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. သင်္ချာဆိုတာ အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ ပုံသဏ္ဌာန်အရွယ်အစား၊ အရေအတွက်နဲ့ အစီအစဉ် အနေအထားဆိုင်ရာ သဘောတရား နိယာမကို လေ့လာတဲ့...
ကလေးမျက်စိကျန်းမာရေးအတွက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် မိခင်တို့ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်များ
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန် မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ရဲ့ အနေအထိုင်၊ အပြုအမူဆိုင်ရာ မှားယွင်းမှုတစ်ခုခုကြောင့် သန္ဓေသားမှာ မျက်စိထိခိုက်တတ်ပါသလား ဆရာ။ ဖြေ. ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်အနေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးသုံးရတယ်ဆိုရင် ကလေးရဲ့ မျက်စိကိုထိခိုက်ဖို့ ရာနှုန်းပြည့်သေချာပါတယ်။...